Farmaajo oo la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee matalaaya Jubbaland! | kowtharmedia.com
Home WARAR Farmaajo oo la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee matalaaya Jubbaland!
Farmaajo oo la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee matalaaya Jubbaland!
“Dalka wuxuu u baahan yahay hoggaamiye dadajiyo dhismaha ciidan qaran lana Tayeeyo Ciidamada Soomaaliyeed si Meesha looga Saaro kooxaha Xagjirka, waxaan ku kalsoonahay in aan ahay shaqsi ay dhab ka tahay noolaynta iyo tayaynta noocyada ciidamada Qaranka iyo hay’adaha Nabadgalyada dalka” Sidaasi waxaa yiri Musharax Farmaajo.
Kulankan wuxuu qayb ka yahay Ololaha Doorashada Musharax Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si xowli ah uga socda magaalada Muqdisho.
Previous PostMadaxweynaha Filibiin oo ku hanjabay in uu diyaarad ka soo ridayo qofkii xatooyo lagu helo! Next PostDaawo Muuqaal> Quwadda Ciidan iyo Ta Dhaqaale ee Sucuudiga!!